बैध भोट मात्रै गनिए आफूले जित्ने ट्रम्पको दावी, अदालतद्वारा उजुरी खारेज : RajdhaniDaily.com
Home अन्तराष्ट्रिय बैध भोट मात्रै गनिए आफूले जित्ने ट्रम्पको दावी, अदालतद्वारा उजुरी खारेज
अमेरिकामा अहिलेसम्म ५० मध्ये ४४ राज्यबाट मतपरिणाम आइसकेको छ । निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउनु भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अदालतबाट मागेको सहारा पनि पाउन असफल भएका छन् । मतगणना तत्काल रोक्न माग गर्दै उहाँले संघीय अदालतमा दिएका उजुरीहरु अदालतले खारेज गरिदिएका छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो मतान्तर कम भएका वा बाइडेनले अग्रता लिएका राज्यहरूमा धाँधली र चुनावी अनियमितता भएको आरोप लगाएका हुन् ।
बाइडेन झिनो मतले अगाडि रहेको नेभाडा राज्यमा यसअघिसम्म ट्रम्पको पक्षमा मत आउने आशामा उनका समर्थकहरूले मतगणना रोक्ने माग गरेका थिएनन् ।
उनले लगाएको आरोप पुष्टि गर्नेगरी प्रमाणहरु नपुगेकोले ट्रम्प पक्षधरद्वारा दर्ता गरिएको उजुरी खारेज गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
जोर्जिआमा ढिलोगरी आएका ५३ वटा मतपेटिकालाई नोभेम्बर ३ मा भएको निर्वाचनको मतपेटिकासँग मिसाइएको दावीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । मिचिगनमा भने मतगणना रोक्न माग गर्दै मत गन्तीको प्रकृयामा पहुँचको माग गरिएको थियो ।
पेन्सिल्भेनियामा मात्र जितेमा वा बाँकी चारमध्ये दुई वटामा मात्र जितेमा पनि बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन् । ट्रम्पले जित्नका लागि भने पेन्सिल्भेनियासहित बाँकी चारमध्ये तीनवटा राज्यमा जित्नैपर्ने हुन्छ ।
यसअघि ट्रम्पको अग्रता पेन्सिल्भेनियामा खुम्चँदै थियो भने अब अर्को राज्य जोर्जिआमा पनि उस्तै स्थिति देखा परिरहेको छ । अमेरिकामा अहिले मतगणना र मुद्धामामिला भइरहेका बेला दुवै उम्मेदवारले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिस्पर्धामा रहनु भएका वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको दावी गर्दै आएका छन् भने अर्का प्रतिस्पर्धी तथा पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनले संयमित हुन सवैलाई आह्वान गरेका छन् ।
मतदान सकिएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत पहिलो पटक राष्ट्रपति ट्रम्पले धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा हुलाक मार्फत गरिएको मतदान एकतर्फी भएको दावी गरेका थिए ।
उनले भने, यदि तपाईँ वैध मतहरू मात्रै गणना गर्नुहुन्छ भने म सजिलै जित्छु । यहाँ धेरै अवैध मतदान भएको छ । मतदानअघि सञ्चार माध्यमहरूले गरेको जनमत सर्वेक्षणलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी हस्तक्षेपको संज्ञा दिए ।
यसअघि ट्रम्पको चुनावी प्रचार अभियान समूहका एक अधिकारीले सीबीएस टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै विजयी भएको बाइडनले घोषणा गर्दैमा राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई नस्वीकार्ने बताएका थिए ।
अन्तिम नतिजा आउनै लाग्दा उनले दिएका अभिव्यक्तिका कारण धेरै अमेरिकीहरुले उनको आगामी कदमको बारेमा आशंका र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्का प्रतिस्पर्धी बाइडेनले भने विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका तथा त्रसित र उत्तेजित भएकाहरुलाई संयमता अपनाउन आह्वान गरेका छन् ।
‘लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ अस्तव्यस्तता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर प्रक्रियाले काम गरिरहेको छ ।’ प्रत्येक मतको गणना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘अमेरिकामा मतदान गर्ने काम पवित्र हुन्छ । त्यसलाई मानिसहरुले कसरी व्यक्त गरेका छन भन्ने हेरौँ ।’
मतगणना सकेपछि आफू र आफ्नो समूहकी उपराष्ट्रपति पदकी उम्मेदवार कमला ह्यारिस विजयी हुने कुरामा “कुनै शङ्का नरहेको” पनि बाइडेनले बताएका छन् ।
अमेरिकामा हरेक चार चार बर्षको नोभेम्बरमा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने गर्दछ। त्यस निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा जनवरी २० मा शपथ ग्रहण गर्दै ह्वाईट हाउस प्रवेश गर्ने परम्परा रहेको छ ।
अगस्टदेखि अमेरिकाले फाइजरको ५० करोड डोज खोप वितरण गर्ने
एजेन्सी - June 10, 2021 0
वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले आगामी अगस्ट महिनादेखि विश्वका ९२ मुलुकका लागि फाइजरले उत्पादन गरिरहेको ५० करोड डोज खोप बितरण शुरु गर्ने जनाएको छ । ह्वाइट...
एजेन्सी - June 9, 2021 0
उत्तर कोरिया । उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनले विदेशी फिल्मसम्बन्धी कडा कानुन ल्याएका छन् । उनले आफ्ना नागरिकले विदेशी फिल्म हेरे मृत्युदण्डसम्मको सजाय...
सुत्केरी महिला वास्तविक उमेरभन्दा किन बढी देखिन्छन् ?
क्यालिफोर्निया । बच्चा जन्मिएको सुरुवाती ६ महिनामा सुत्केरी महिला आफ्नो वास्तविक उमेरभन्दा तीनदेखि सात वर्षसम्म जेठी देखिने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ...
विवेकविवश रेग्मी -
इटहरी । ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना ‘समृद्धि’ ले चार वर्षको अवधिमा तीस हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन हाल सीप प्रदान गरिरहेको छ । वाणिज्य तथा...
काठमाडौं । कोभिड–१९ सङ्क्रमण घट्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि लागू निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइएको छ । तीन वटै जिल्लामा एकैसाथ लागू भएको निषेधाज्ञा असार...
मौलापुर नगरपालिकामा २५ सैयाको आइसोलेशन निर्माण हुँदै
गौर । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा २५ सैयाको आइसोलेशन निर्माण भइरहेको छ । जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको र सम्भावित संक्रमितका लागि पूर्वतयारीको...
लिने होइन त माउन्टेन फ्लाइटको मज्जा ?
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण साढे आठ महिनादेखि बन्द भएको पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) शनिबारबाट व्यावसायिक रूपमै सञ्चालनमा आएको छ । निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले...
म्यानमारमा सेनाद्वारा शासनसत्ता आफ्नो हात लिएको घोषणा
प्रमुख Kumar Raut - February 1, 2021 0
न्यापिटअ । म्यान्मारको सैनिक टेलिभिजनले म्यान्मारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ । आङ सान सुकी समेत देशका सबैजसो...
मिलान र एटलान्टाले अंक बाँडे
खेल Kumar Raut - July 26, 2020 0
रोम । इटालियन सिरी ‘ए’मा एसी मिलान र एटलान्टाले १–१ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । मिलानोमा शुक्रबार राति भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा घरेलु...
Breaking News Roshan Shrestha - March 19, 2020 0
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण काम थाल्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालय...
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - November 30, 2020 0
भारतबाट आएका ३९ जनालाई स्थानिय तहको क्वारेन्टिनमा राखियो
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - May 22, 2020 0
बागलुङ । कामको लागि भारतका विभिन्न स्थानमा बसेर लकडाउनको समयमा नेपाल आएका बागलुङका ३९ जनाको उद्धार गरी बागलुङ ल्याइएको छ । भारतबाट आएर कपिलवस्तु...
नवनियुक्त बोर्ड सदस्यद्वारा शपथग्रहण
खेल Kumar Raut - October 20, 2020 0
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपमा सोमबार युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा...
नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने बेलामा बेड छैन भन्नु सरकार गैह्रजिम्मेवार : कांग्रेस
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - May 1, 2021 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमित विरामीका लागि अस्पतालमा बेड छैन भन्नु सरकारको लाचारीपन भएको बताएको छ । महामारीको समयमा सरकारले नागरिकलाई ढाडस र सहयोग...
कोरोना नमस्ते अभियान
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - March 2, 2020 0
पोखरा । अतिथि सत्कारमा पोखरासहित गण्डकी प्रदेश नै अग्रणी स्थानमा आउँछ । यहाँ प्रकृतिका मनोरम छटा त छँदैछन्, यहाँका मानिसको आतिथ्यताले यहाँ आउने जो...
कौशिला कुँवर - June 20, 2021
विवेकविवश रेग्मी - June 20, 2021
धितो पत्र बोर्डको विज्ञप्तीको असर, ५२ अंकले घट्यो सेयर